महरा र रोशनीमध्ये को जेल जालान् ? कानुनविदले देखे यी सम्भावना « रिपोर्टर्स नेपाल
महरा र रोशनीमध्ये को जेल जालान् ? कानुनविदले देखे यी सम्भावना
प्रकाशित मिति : 2019 October 3, 8:56 am
काठमाडौं, १६ असोज । १२ असोजको साँझ तीनकुनेस्थित रोशनी शाहीको कोठामा कोही प्रवेश गर्यो । उनीमाथ जर्बजस्ती गरेर आक्रमण समेत गर्यो । आक्रमण गर्नेको फुटेको चश्मा र जुत्ता समेत कोठामा भेटियो ।
घटना त्यतिकै भासभुस हुने सम्भावना कम भइसकेको छ । प्रहरीले अनुसन्धान थालिसकेको छ भने नागरिकको ध्यान घटनाको कारबाही कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेतर्फ गइसकेको छ ।